नेपालगञ्जमा चिकित्सक सहित ७० स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण « Drishti News – Nepalese News Portal
नेपालगञ्जमा चिकित्सक सहित ७० स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण
१५ बैशाख २०७८, बुधबार 7:25 am
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कार्यरत ७० स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । ति मध्ये ७ जना चिकित्सक रहेका छन् । ओटी, इमर्जेन्सी, पारामेडिक, आईसीयूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना लागेको हो ।
‘हामीले नर्मल बिरामीलाई भर्ना लिएकै छैनौं,’ डा. राजन पाण्डेले भने, ‘बिरामीले बेड नपाइरहेको अवस्थामा चिकित्सकले अस्पतालमा बस्ने कुरा भएन ।’ अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि २ सय बेड बनाइएको छ ।
वार्डका कुनाकाप्चामा समेत बेड थपेर बिरामीको उपचार भइरहेको छ । ‘सामग्रीको अभाव त खासै छैन । प्रमुख कुरा जनशक्ति अभाव हो,’ अस्पताल प्रमुख डा. प्रकाश थापाले भने, ‘महामारी सुरु भएदेखि नै कम जनशक्ति अनि स्रोतसाधनको अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न छाडेका छैनन् ।’ अस्पतालमा हाल करिब ४ सय स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।
गत वर्ष कोरोना उपचारका लागि छुट्याइएका चिकित्सक तथा नर्सले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । संक्रमित भएपछि आइसोलेसनमा बस्ने र निको भएपछि फेरि उनीहरू काममै फर्किने गरेका छन् । ‘अस्पतालभित्र काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक ढिलोचाँडो संक्रमित हुने सम्भावना भइहाल्छ,’ कोभिड वार्डकी नर्सिङ इन्चार्ज शिला शर्माले भनिन्, ‘बिरामी नछोएर उपचार सम्भव छैन ।
बिरामीलाई कसरी बचाऊँ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेका हुन्छौं ।’ अस्पतालमा मास्क, पीपीई, पन्जालगायत सामग्री भने पर्याप्त छैनन् ।अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिडका बिरामीमध्ये ६० जना आईसीयूमा छन् भने १० जना भेन्टिलेटरमा छन् ।
बाँकेमा मंगलबारमात्रै ६ सय ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अस्पताल थप भर्ना लिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यस्तै, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका ३० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन् । बेड अभावका कारण सबै स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन् ।
‘एक चिकित्सक क्रिटिकल अवस्थामा रहेकाले अस्पतालमा उपचारमा हुनुहुन्छ,’ अस्पतालका उपनिर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘यो संख्या थप बढ्न सक्छ ।’ नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा हाल ५० जना संक्रमित उपचाररत छन् । जसमध्ये २८ जनाको स्थिति गम्भीर अवस्थामा रहेको अस्पतालका उपनिर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए ।
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको विज्ञ टोलीले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि भेरी अस्पताल प्रशासनलाई केही राहत मिलेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमुख विशेषज्ञ डा. महेन्द्र श्रेष्ठ र प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रोशन न्यौपानेसहितको टोलीलाई भेरी अस्पतालको अवस्था बुझ्न नेपालगन्ज पठाएको थियो ।
अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरूको परामर्शपछि विज्ञ टोलीले ८० जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको सिफारिस मन्त्रालयलाई गरेको थियो । सिफारिस गरेको दुई दिनमै मन्त्रालयले बजेट र जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेको हो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले मन्त्रालयले निर्णय पठाएपछि तीन दिनभित्रै ८० जना जनशक्ति थप्ने गरी विज्ञापन गरिसकेको बताए ।
मन्त्रालयले जनशक्तिका लागि असारसम्म खर्च हुने ६८ लाख बजेट पनि निकासा गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भेरीका लागि १० जना मेडिकल अफिसर, दुई जना नर्सिङ अधिकृत, तीन जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट, पाँच जना ल्याब टेक्निसियन, ४० जना स्टाफ नर्स र २० जना सरसफाइकर्मी गरेर ८० जना जनशक्ति थपिँदैछन् ।
मन्त्रालयले भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको उपचारका लागि २५ हजार, आईसीयूका लागि १० हजार र अक्सिजन बेडका लागि ३ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि अस्पतालले भेन्टिलेटरका बिरामीका लागि १५ हजार, आईसीयूका लागि ५ हजार उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकबाट